Alahadin’ny AFIFAB 2019. – FJKM
ALAHADY 24 MARTSA 2019
« Manamasina fiainana ho an’ny Tompo »
II Kor.13: 14
2-Fisaorana sy Fiderana
Salamo 95: 1-3
Hira 211 : 3
3-Sitrapon’Andriamanitra : I Jaona 2: 3-5
Sambatra ny mahitsy lalana …..
Hira 307: 5
Hira FF 34 : 1-3
Jaona 5: 24
Sambatra ny olona izay …..
Hira FF 26: 2
6-Fanekem-pinoana Apostolika Laharana 4
Hafatra AFIFAB – FJKM
Hira 176: 1-2
Vakiteny : Deot. 28: 5- 14 / Jaona 8: 2- 11 / Efes. 5: 3- 7
Hira 190 : 2
Isaorantsika an’ Andriamanitra ry havana ary ankasitrahantsika ireo mpiara-miasa sy mpanohana rehetra fa mizotra tsara ny asan’ ny FIFAB FJKM hatreto. Efa mandeha soa amantsara ny Radio Fahazavana any Toamasina sy Ambatolampy, manampy ny eto Antananarivo sy Mahajanga. Ankehitriny dia eo am-pikarakarana ny Radio Fahazavana amin’ ireto toerana ireto isika: Miarinarivo, Ambatondrazaka, Fianarantsoa, Moramanga ary Sambava,. Koa manainga antsika hitondra am-bavaka, indrindra hanampy amin’ ny tolo-tànana sy fampitaovana hampandehanana azy ireo.
Alahadin’ny Fifandraisana anio Alahady 24 Martsa 2019 araka ny hitantsika ao amin’ny Perikopa eto amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Araka izany entanina isika fiangonana sy ny kristiana FJKM rehetra hitondra am-bavaka ny asa sahanin’ny Asa Fifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao FJKM na ny AFIFAB amin’ ity andro anio ity na amin’ny fotoana maha-mety izany eo amin’ny fiainan’ny fiangonana tsirairay. Tena zava-dehibe aminay izany eo amin’ny fanatanterahana ny asa satria mariky ny fiombonana eo amintsika.
Anisan’ ireo asa izay tiana hampahafantarina koa mantsy :
-Ny Haino aman-jery izay misy ny Famokarana fandaharana amin’ ny Televiziona sy ny Radio Fahazavana izay mifanerasera amintsika isanandro amin’ny alalan’ny fandaharana samihafa, tsy vitan’ny milaza ny vaovao tsara ho fantatra eo amin’ny fiainan’ny FJKM ihany fa fitaovana lehibe hitoriana ny Filazantsara sy hijoroan’ny FJKM ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eto amin’ny firenena koa.
–Ny gazety Marturia Vavolombelona mivoaka isaky ny tapa-bolana ahitana lahatsoratra fandalinam-pinoana, vaovao samihafa momba ny fiangonana, famakafakana lohahevitra samihafa momba ny fanabeazana sy ny kolontsaina
-Ny tranonkala na ny « site web » FJKM ahitana ireo vaovao samihafa sy ny tsara ho fantatra momba ny FJKM,
-Ny Arofenitra izay fandrindrana sy fandaminana ny amin’ ny fandavorariana ny fotoan-dehibe samihafa eo amin’ ny Fiangonana: eo am-pandrafetana ny torolàlana momba izany ny AFIFAB ankehitriny. Mandray anjara amin’ny fikarakarana sy ny fandaminana ireo fotoan-dehibe tanterahin’ny FJKM ao anatin’ny taona amin’ny alalan’ny arofenitra ny AFIFAB
Manampy ireo , ny famokarana fandaharana amin’ny haino aman-jery harahintsika any amin’ny fahitalavitra eto an-dRenivohitra. Misy ny fanofanana ny tanora momba ny fifandraisana araka ny fotoana mahamety izany sy ny fanomezana tantsoroka ny fitandremana amin’ny alalan’ny fanofanana ilainy momba ny fifandraisana, fanaovan-gazety, famokarana fandaharana amin’ ny Televiziona izay ataon’ny AFIFAB. Manentana antsika ihany koa hanangana ny rafitra AFIFAB isam-pitandremana hampita ireo vaovao samihafa aty amin’ ny Foibe AFIFAB sy hiandraikitra ny serasera ao anatin’ ny Fitandremana.
Mahatoky izahay, ry havana fa hanao ho zava-dehibe ny fanohanana izany isika rehetra araka ny tenin’ ny Tompo manao hoe: “fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny Anarany” Hebreo 6: 10a
Manonona ny fiadanan’ ny Tompo ho aminareo rehetra.
Ny Filohan’ ny Komity AFIFAB-FJKM Ny Talen’ ny AFIFAB
RAFANONERANTSOA Valisoa,Mpit RAZAFIMALALA Tantely H.
FOIBE FJKM / HAONA FY 2019
RTA / « MIHARY FINOANA »